စက်ဘီးစီးခြင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှာအဘယ်နည်း။ - စက်ဘီးစီး
အဓိက > စက်ဘီးစီး > စက်ဘီးပြား - ပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်
စက်ဘီးပြား - ပြည့်စုံလက်စွဲစာအုပ်
တစ် ဦး ကဂန္ Two- မူလီSPD cleat။
တစ် ဦး နှင့်အတူတစ်ဖိနပ်၏ဥပမာSPD cleat, ပြီးနောက်SPDကအတွက်ကလစ်နိုင်ခြေနင်း။
စက်ဘီးစီးဖိနပ်တစ်စီးကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်စေ၊ ပဉ္စမနေရာဖြစ်စေဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်မလွယ်ကူလှပါ။ စျေး၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ မသင့်တော်မှုနှင့်အသွင်အပြင်သည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောစက်ဘီးစီးဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
ယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်သောဖိနပ်အမျိုးအစားများကို ဦး စွာမေးမြန်းပါ။ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီးဖိနပ်နှင့်တောင်တက်စက်ဘီးစီးဖိနပ်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ခြားနားသောအချက်မှာလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ဖိနပ်မှာလမ်းလျှောက်။ မရသည့်လမ်းလျှောက်။ မရသည့်လမ်းဖြစ်သည်။ ပိုပြီးအခြေခံကျတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုကတော့လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီးဖိနပ်မှာသင်သုံးနိုင်မယ့် screw နှစ်ခုခြေနင်းပါ ၀ င်တာပါ။ ဒါကလမ်းမကရော၊ လမ်းမရောနှောရရင်တောင်မှစက်ဘီးဖိနပ်ကပိုစွယ်စုံရမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ , ဒါပေမယ့်ငါစက်ဘီးစီးဖိနပ်အတွက်ယေဘုယျခေါင်းစဉ်၏လမ်းကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဖိနပ်၏အကြောင်းရင်းကြောင့်သင်ဒီမှာရောက်နေကြောင်းစိတ်ကူး, တစ် ဦး တည်းသော၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုရည်ညွှန်းသောတောင့်တင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ယခုသီအိုရီကပိုခိုင်မာတဲ့တစ် ဦး တည်းသောခြေနင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရကြည့်လျှင်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထိုအတိုင်းပင်ခံစားရသည်။ သို့သော်အဆင်မပြေမှုများရှိနိုင်ပြီးသင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့လမ်းမှတုန်ခါမှုပိုများလာသည့်အတွက်အတွေ့အကြုံနည်းသောမြင်းစီးသူများကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေနိုင်သည်။ t ထို့အပြင်တစ် ဦး တည်းသောအပင်၏တောင့်တင်းခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ခံစားနေရပါကဆင်းရဲသောမထိုက်မတန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြanyနာကိုမဆိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ - အားဖြည့်နိုင်လွန်နိုင်လွန်၊ နောက်ဆုံးတွင်ကာဗွန်အပြည့်အဝခိုင်မာသောသာမကပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အပြင်ဖိနပ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Fit နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်သည်ပေါ့ပါးခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
ထို့နောက်လူလုပ်သောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောစက်ဘီးစီးဖိနပ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောအပေါ်စီး၏ပစ္စည်းကိုကြည့်ကြပါစို့။ သို့သော်သားပိုက်ကောင်သားရေဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးစီးဖိနပ်သည်သင်၏ခြေထောက်ကိုပွေ့ဖက်။ ကောင်းသည်။ ၀ တ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ရှိပါသည်။ သင်၏ဆလိုက်အတွက်အပေါ်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်လေဝင်လေထွက်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်သန့်ရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများသောဖိနပ်များဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ကို ပို၍ ခက်ခဲသည်။ သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ဒါကြောင့်အညစ်အကြေးကမဖယ်ရှားနိုင်လို့အနက်ရောင်ကွက်လပ်ကအရမ်းကြီးနေတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကတော့ဒီနေရာမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့နေရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သန့်ရှင်းရေးကိုထားဖို့အများကြီးပိုလွယ်တယ်၊ ဆိုးဝါးသောအခြေအနေများတွင်သဘာဝဒြပ်အမျှင်များကိုသဘာဝအလျောက်အမျှင်များပိုမိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အပူချိန်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ စျေးကွက်တွင်စတိုင်များများစွာရှိသည်။ ဤအကြောင်းအရာများသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ သူတို့သည်အစာရှောင်ကြသည်။ သူတို့သည်ပေါ့ပါးပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။eshoelaces များသည်အထူးသဖြင့် retro-oriented ဖိနပ်များတွင်တစ်ကျော့ပြန်လာနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Velcro နှင့် buckles များ၏လိုင်းများကိုမအောင်နိုင်သေးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်လုပ်ရမှာကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီတော့ဒါကဘာကိုဂရုစိုက်ရလဲ၊ ကောင်းပြီ, သင်ကစက်ဘီးစီးဖိနပ်သို့မဟုတ်တောင်တက်ဖိနပ်ကိုလုပ်သကဲ့သို့သင်စက်ဘီးစီးဖိနပ်ကိုသလောက်အာရုံစိုက်သင့်သည်၊ အကယ်၍ အရာအားလုံးဖြစ်ခဲ့ပါကအမြဲတမ်းစက်ဘီးအပြေးဖြင့်ကြိုးစား။ သတိရပါ၊ သင်သည်စုံတွဲတစ်တွဲသာသာ ၀ တ်သင့်သည်။ စက်ဘီးစီးနေသည့်ခြေအိတ်များ၊ သင်ပိုမိုနွေးထွေးမှုလိုအပ်ပါက၎င်းတို့ကိုအလွှာချပါ။ သင်ဖိနပ်စီးသောအခါဖိနပ်၏အောက်တွင်မထားပါနှင့်။ အချို့သောသူများအတွက်အရှည်နှင့်ဖိနပ်၏အကျယ်နှင့်ပမာဏကိုလည်းအာရုံစိုက်ပါ။ အခြားသူများအနေဖြင့်သင်ဖိနပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပိတ်နိုင်အောင်သေချာစေရန်ဖိနပ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အခြားသူများအနေဖြင့်ဖိနပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပိတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ပါ၊ ဖိနပ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ၊ tiptoe ပေါ်တွင်ရပ်ပါ။ သင်၏ဖနောင့်ကိုအပြည့်အဝရွှေ့နိုင်၊ မနိုင်ကြည့်ပါ။ ကောင်းသောဖနောင့်ခွက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
အခုငါအပူချိန်ပြproblemနာကိုကိုင်တွယ်ပြီးပြီ။ အချို့လူများစီးနင်းနေစဉ်ခြေထောက်ပူခြင်းကြောင့်ခံစားရသောကြောင့်နာရီပေါင်းများစွာထိုင်။ ထိုင်ခြင်းမှပွတ်တိုက်တည်ဆောက်မှုကို ၀ ယ်သည့်အခါလေဝင်လေထွက်ကိုဂရုပြုသင့်သည်။ ဒါ့အပြင်စဉ်းစားဖို့လိုကောင်းလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သင်၏ချွတ်ယွင်းသောအနေအထားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကားမောင်းနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ခြေထောက်ပူပြင်းခြင်းကိုလုံးဝခံစားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါ၊ ဆောင်းတွင်းမှာမင်းဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ပြီးလေဝင်လေထွက်အပေါက်တွေရှိရင်ငါ့မှာ Opus ရှိတယ်။ မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအေးစေလိမ့်မယ်။ မင်းကသမုဒ္ဒရာကိုစီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးခိုင်မာသောစိတ်ဝိညာဉ်ဟာဒီထက်ပိုပြီးစွယ်စုံဆန်တယ်လို့ထင်တယ်။ - သင်၏စက်ဘီးစီးဖိနပ်ကိုသင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်တောင့်တင်းမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ခရီးစဉ်ကိုရပ်နားပါ။ အနီးကပ်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်၏အပြင်ဘက်နှင့်အပြင်ဘက်အစွန်အဖျား၏အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုပါရွေးချယ်ပါ။ အသွင်အပြင်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ အမြဲတမ်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်စက်ဘီးစီးဖိနပ်တစ်ချောင်းကိုအမြဲဝယ်ပါ၊ ငါသူတို့အမြဲတမ်းအဖြူရောင်ရှိသင့်သည်ဟုထင်ပါသလား။ ငါအနက်ရောင်တွေကြိုက်တယ် မသိ
အကယ်၍ သင်သည်အဖြူရောင်စက်ဘီးစီးဖိနပ်ကို ၀ ယ်လိုပါကသင်၏စက်ဘီးစီးဖိနပ်ကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမည်နှင့်အရောင်မည်သို့ပင်ရှိပါစေအထက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးကိုသေချာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ လူတိုင်းသည်သင်၏ဖိနပ်၏အနေအထားကိုဂရုပြုရန်လိုသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ပြီးတော့ GcN ကိုစာရင်းသွင်းရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှကိုလုပ်ပြီးသောအခါ၊ ငါ့ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဖိနပ်အချို့မေးလို့ရမလား။ အနည်းငယ်? တစ်ရက်တည်း။ ။ သုံးရက်သွားပြီ .BayOkay
ရာဝတီချောတစ် ဦးကောင်းတယ်စမှတ်။ မင်းတို့လွယ်လွယ်ကူကူလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်မြှောက်ဖိနပ်နဲ့ဖိနပ်ကိုသုံးနိုင်တယ်။ကောင်းတယ်အထွေထွေအဘို့စက်ဘီးစီးခြင်း, ခရီးသွားခြင်းနှင့် Tour ။ ၎င်းတို့သည် unclip လုပ်ရန်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ အချို့ကခြေနင်းပေါ်ခြေဘ ၀ ရှိခြေထောက်ရွေ့လျားမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ (ဤနှစ် ဦး နှစ်ဖက်လှုပ်ရှားမှုကို 'float') ဟုခေါ်သည်။မေလ 9, 2017
TO သို့ပါးစပ်အစားနင်းအလိုတော်လုပ်သုညခြားနားချက်စွမ်းအားအပြည့်ဖြင့်သူတို့အားလုံးသည်တူညီသောအင်အားပမာဏကို crank သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်စတင်အသုံးပြုပါကသင်စတင်အသုံးပြုပါကသင်ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်ချောမည့်အစားခြေနင်း...အောက်တိုဘာ ၆ ၂၀၁၀
လများစွာအကြာကပြားချပ်ချပ်နှင့်အညစ်အကွေးများအကြားထိရောက်မှုနှင့်ခြားနားချက်ကိုရှာဖွေရန်ဗာတက္ကသိုလ်မှဓာတ်ခွဲခန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့အံ့သြစရာကနည်းနည်းလေးကွာခြားမှုရှိတယ်။ - ဒါဆိုငါတို့ဘာဖြစ်လို့နှောင့်ယှက်တာလဲ။ ဆိုလိုတာက clipless pedals တွေဟာအားသာချက်အချို့ရှိရမယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကလေးဘဝတုန်းကလိုခြေနင်းခြေနင်းဖိနပ်တွေဖိနပ်စီးစက်ဘီးစီးတာမျိုးကိုခံစားချင်တာကိုရှာဖွေဖို့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး Alta Badia ပရဒိသုထဲကိုရောက်သွားတယ် ။- ဒန်၊ သင်တကယ်သုံးမှာပါ။ ဒီဖိနပ်လား - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ခြေနင်းအပြားပေါ်မှာရှိတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးဖိနပ်စီးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။ ထိုသူတို့ကတော်တော်လေးအေးမြသည်။ (ပျော်စရာအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများသည် Si Ridingat တည်ငြိမ်သောအခြေအနေကို ၁၀ မိနစ်စီပါဝင်သည်။
ဒီတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာနဲ့စကြရအောင်။ Sprint ။ အကယ်၍ သင်နင်းခရီးကိုဆွဲ။ မရနိုင်ပါကအထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာကွာခြားမှုရှိလိမ့်မည်။ - ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကလား။ ရှာကြစို့။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုငါးခုကိုပြုလုပ်ပြီး ၃ စက္ကန့်နှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားကိုငါးစက္ကန့်စီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမည်ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသင့်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်အမြင်များအကြောင်းကိုလည်းပြောလိမ့်မည်။ (funky အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) ကောင်းပြီငါ Matt ပြောတာကတော့သူပြောတဲ့အသံပေါ်မူတည်ပြီးဒီနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကိုထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါပြားချပ်ချပ်ငါ့အများဆုံးစွမ်းအင်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Matt ငါးယောက်စလုံးအတွက်ငါ့ကိုရိုက်နှက်လို့ပဲ။ ရလဒ်တွေကနောက်မှလာလိမ့်မယ် ။- အိုကေ၊ ပထမ ဦး ဆုံး Sprintback အတွက်အချိန်မရှိတော့သောခြေနင်းများပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ပြန်လာမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခင် Sprint နံပါတ်များသို့ပြန်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မည်။
သေချာသည်နောက်တဖန်အစိုင်အခဲဖြစ်ဖို့ပိုကောင်းခံစားရသည်။ ကောင်းပြီသွားကြကုန်အံ့။ (funky အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) အင်း။
အလှအပ။ ညာဘက်, သုံးစက္ကန့်နှင့် 1139, ကောင်းစွာပြားချပ်ချပ်ခြေနင်းအထက်။ Matt ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်
နောက်တဖန်ထပ်လုပ်ကြရအောင်။ (funky အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - ထို့နောက်တက်ကြကုန်အံ့။ ငါတို့တစ် ဦး စီသည် ၁၀ မိနစ် Passo Valparola ၏အပိုင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ပါဝါနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း petal systems နှစ်ခုကြားမှာခံစားရတဲ့ခြားနားချက်ကိုပြောပြပါ။ (တင့်တယ်သောဂီတ) - ကောင်းပြီ၊ ဒန်၊ ငါတို့ ၇ မိနစ်ကျော်ကြာပြီ။
တိုက်ခန်းထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ ၃၀၀ ဝပ်သည်အလွန်ခက်ခဲသည် - ဟုတ်ကဲ့ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခြေနင်းများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောခံစားချက်ရှိသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီချုပ်ကိုင်တွေအများကြီးရှိသည်။ ငါမျှော်လင့်ထားတာထက်ပို
သင်ခြေနင်းသွားလာမှုအောက်ခြေနှင့်ထိပ်ဆုံးသို့ခြေထောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည်။ နင်မတက်နိုင်ရင်တောင်ငါဆိုလိုတာကမင်းကမတူကွဲပြားတာပဲလို့ခံစားရပေမယ့်အဲ့တာက sprinting လိုမျိုးထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ - သေချာတာပေါ့။ (cheeky music) - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊
အိုးခက်ခဲပါတယ် - ဟုတ်တယ်။ (live music) ကောင်းပြီ၊ အခု Flatsand မှာငါ့အလှည့်ပဲ။
သတိပြုသင့်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်းနှီးအမြင့်ကိုမပြုပြင်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁ လက်မ (သို့) နှစ်ခုအကွာအဝေးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၀ မိနစ်ကျော်ကငါတို့ကိုသိပ်မထိရောက်ပါဘူး။ သို့သော်ခြေလျင်တည်နေရာသည်ချက်ချင်းပင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ (မတိကျသောတေးဂီတ) (လူအုပ်ကတေးသီချင်းကိုရွှင်လန်းစွာ) - စက္ကန့် ၅၀ အပြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀ မိနစ်ကျော်သည်။
ယခုအချိန်အထိအတူတူပင်ပျှမ်းမျှစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်။ - အေးမြ။ - ထိုနည်းနည်းမတ်စောက်သောမဟုတ်လော - ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များသည်ယခုအချိန်အထိဒန်အထိ ပို၍ နာကျင်သည်။ (ပျော်ရွှင်သောတေးဂီတကိုလူအုပ်ကြီးက ၀ မ်းသာသည်) ငါတို့တူညီတဲ့နေရာမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်။
နှစ် ဦး အိုကေ၊ ဒီအချိန်ကအခုပျော်နေပြီ။ အဆင်း။
ဒီကလေးငယ်များသည်ဆံပင်အလှည့်များတွင်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ - ငါ dismount လုပ်ဖို့ကိုချစ်။ ဒါပေမယ့်ဒန်၊ မင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အပေါ်မှာအဖုံးလိုတယ်။
သင်မထွက်ခွာနိုင်ပါ၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာတစ်ခုရှိသော်လည်း Red Bull တီဗီမှာဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ မင်းတို့မှာခြေနင်းချပ်ချပ်များရှိပြီးတကယ်အေးမြသောဖိနပ်များရှိပါက၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုရမည်။ - မျက်နှာအပြည့် ဦး ထုပ်လား။ - ဟုတ်ကဲ့ - Lycra နှင့်အတူ? (Dan grunts) - အဲဒါဘယ်သူ့ကိုပိုင်သလဲ။ သူတို့မှာခေါင်းသေးသေးလေးရှိတယ်။ (Dan grunts) (ရော့ခ်ဂီတ) - ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ကစက်ဘီးစီးသူတချို့ကသူတို့ခြေနင်းချပ်ချပ်ကိုပေးတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုနှစ်သက်ကြရင်တောင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးဝင်မလား။ ကောင်းကောင်းတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့်အရာသည် Valparola ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဆင်းပြီး၎င်းသည်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ (ရော့ခ်ဂီတ) - Ow ။ (ရယ်မောသံများ) (ရော့ခ်ဂီတ) - ကတ္တရာအချို့ကိုထွင်းကြစို့။ (ရော့ခ်ဂီတ) (နှိပ်ပါ) (ရော့ခ်ဂီတ) - မှန်ကန်တဲ့ရလဒ်တွေကို KPIs အရသတ်မှတ်ထားသည်။
ငါတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြမယ်။ ဒီတော့အစမှာရှိတဲ့ Sprint တွေအတွက် Matt မှာတိုက်ခန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူတို့က clipless ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ 15% ပိုပြီးစွမ်းအားရှိခဲ့တယ်။ ငါ 30% ခြားနားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ - Wow, ဒါကကြီးမားတဲ့ပေါင်းလဒ်။ - ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်။ - အင်း။
ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကလစ်ကင်းမဲ့တဲ့ခြေနင်းကိုကန်လိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်မှာဒီထက်ပိုပြီးပါဝါပိုရှိတယ်လို့သတိပြုမိခဲ့တယ်။ Sprint တုန်းကကျွန်တော်ရထားကိုသုံးခဲ့တယ်။ မင်းထက်ပိုပြီးပေါ့။ BMX ၏ကုန်းဆင်းတောင်ပေါ်စက်ဘီးသည်ယခုအစောပိုင်းအိမ်၌ပြုလုပ်သော Sprint အတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောခြေနင်းကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရကြောင်းကိုပြသသည်မှာသင့်အားပြသသည်မှာသေချာသည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်သည်ကျွန်ုပ်ပင်စဉ်းစားရန်လိုသောနေရာမှန်သို့ရောက်ရန်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်အနေအထားကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပြီး Sprint တွင်တက်။ မတက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပေါင်များစွာကိုထပ်မံစုဆောင်းခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ပေါင်ကိုပစ္စတင်ကဲ့သို့သုံးနေသလိုမျိုးကျွန်တော်စက်ဝိုင်းထဲမှာကန်နေသလိုမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကမဆိုးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကွဲပြားတယ်။
အချို့သောအပေးအယူညှိနှိုင်းမှုများရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကလစ်များနှင့်ကဲ့သို့ပါဝါကိုပိတ်ထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မခံစားခဲ့ပါ - ဟုတ်၊ အခုကျွန်တော်တို့ကလစ်ကလစ်မပါတဲ့ခြေနင်းကိုအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဆွဲထုတ်ဖို့မအားထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ငါခြေနှစ်ချောင်းကနည်းနည်းလေးဆွဲထုတ်လိုက်လို့ငါခြေချတဲ့နေရာမှာငါအကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေတစ်ချောင်းကအဝေးကနေလာတယ်။
ဟုတ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပျမ်းမျှ ၃၀၀ ဝပ်လောက်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ မင်းကမင်းကိုငါ့ဘေးမှာမောင်းတယ်။
ငါ့မှာတိုက်ခန်းတွေရှိတယ်၊ မင်းမှာ clipless ရှိခဲ့တယ်၊ ငါ့မှာပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၀၃ watts ရှိတယ်၊ မင်းမှာ ၃၁၅ ရှိတယ်။ clipless pedals တွေကိုပြန်လှည့်ပြီး ၃၀၅ ဝပ်ဝပ်ပျမ်းမျှအားရချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ မင်းမှာ ၃၁၈ ဝပ်ရှိပြီးမင်းက ၃ ဝပ်ထက်ပိုတယ်။ တောင်တက်တာနဲ့အမျှတောင်တက်တာဟာကွာခြားတာကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။
ကျွန်မက clipless pedals တွေနဲ့ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ သင်ဆွဲနိုင်သည့်အခါ၎င်းသည် ၃၀၀ ဝပ်စွမ်းအားကိုကြွက်သားအုပ်စုများသို့ဖြန့်ဝေသည်။ သင်၌သဲပြားများသာရှိပြီးတွန်းတင်နိုင်သည် - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးခုန်နှုန်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပေါင်များနာကျင်မှု၊ ပုံမှန်ကလစ်ညှပ်ဖိနပ်များထက်နွားသငယ်ကြွက်သားများစုဆောင်းမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးမှာကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အချက်များ ငါသွားတော့မယ်၊ နင်ထွက်သွားတုန်းကပရင်တာနဲ့တူတဲ့ရင်ခုန်သံတွေလိုငါလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ သင်သွားပြီဆိုရင်ကုန်းနှီးကိုလုံးဝဆွဲထုတ်လို့မရဘူး၊ pedal stroke ဒါကြောင့်ကန်တာနဲ့ကန်တာနဲ့တူတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကုန်းနှီးကနေတက်ရတာကိုအထူးမနှစ်သက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ထိုင်ခုံကသိပ်မကောင်းဘူး။ - ဟုတ်တယ်။
ဒီနှစ်ခုအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်မှမတူခဲ့ကြပေမယ့်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကဓာတ်ခွဲခန်းမှာတွေ့ခဲ့တာနဲ့တော်တော်ဆင်တူတယ်။ ဒီခြေနင်းတွေဟာထိန်းချုပ်မှုအတော်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့ပြီ။ မင်းဆွဲလို့မရဘူး၊ တောင်ထိပ်ကိုဖြတ်ပြီးခြေနင်းကိုဖြတ်ပြီးခြေကုပ်ကုတ်ခြစ်နိုင်တယ်။ ကနင်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါ၏အအေးမြဖိနပ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ထွက်ခွာ, ငါတို့မဆိုနံပါတ်များကိုယူခဲ့ပါဘူး။
ဒါကသက်သက်သာခံစားမှုသက်သက်ပဲ။ ငါမျက်နှာပြည့် ဦး ထုပ်ဝတ်ဆင်အပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါပုံမှန်တ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုပိုကောင်းစေတယ်၊ ​​ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့မတူတာနဲ့တူတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သံခမောက်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခြေဘဝါးတွေကိုယ်နှိုက်ကသူတို့ကိုဖုံးလိုက်တဲ့အခါထောင့်အနည်းငယ် ငါလည်းနင်တို့ခြေရာနင်းခဲ့ဖူးတယ်ထင်တယ်ထင်တယ်၊ ငါခြေနင်းတွေကိုတကယ်ချွတ်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအများကြီးပိုကျယ်တယ်၊ တကယ်တော့ငါမမှန်နိုင်တဲ့ထောင့်တစ်နေရာမှာအမြန်ပြေးမောင်းတစ်ယောက်လိုခြေထောက်ကိုငါထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ခြားနားချက်သိပ်မကွာလှပါ၊ ခြေနင်းပေါ်ရှိသင်၏အနေအထားနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်ကွဲပြားခြားနားချက်များသာဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာဆံပင်အနက်အချို့မှအရှိန်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှငါ့ခြေထောက်များရွေ့လျားနေသည်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်။ ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ကကျယ်ပြန့်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်သူတို့ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာအများကြီးလွယ်လွယ်ကူကူရိုက်နိုင်ပြီးတော်တော်အန္တရာယ်များနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါထင်တယ်၊ မင်းသာပန်ဒရင်ကိုပြန်သွားလျှင်၊ ထောင့်အပြင်ဘက်မှာအမြန်ပြေးနိုင်အောင်စွမ်းအားအများကြီးရှိတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဆင်းသက်လာအပေါ် clipless အပေါ်ပိုမိုမြန်ဆန်ပေါ့လို့ပြောလိမ့်မယ် ။- ဒီမှာအတူတူပါပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်မှငါတို့စက်ဘီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မောင်းထုတ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။
သူတို့ကအားကစားသမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ clipless pedals ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်နဲ့တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းအခြေအနေတွေမှာယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကျိန်းသေထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို GMBN ကိုကျွန်တော်သွားမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာကမ္ဘာ့စက်ဘီးကွန်ယက်ကိုမ ၀ င်သေးဘူးဆိုရင်၊ ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့သင် Camelback GCN ရေဘူးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် shop.globalcyclingnetwor k.com ကိုသွားပြီးအခုဗီဒီယိုစုံတွဲလေးတစ်ခုပေါ်လာပါ။ ငါတို့ပြောနေတာတွေနဲ့တော်တော်လေးဆက်စပ်နေတယ်။
ဤတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော clipless ခြေနင်းကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ သို့မဟုတ်၊ မူလခြေနင်းချပ်များနှင့်ပြားသည့်ခြေနင်းများအကြား၊ Si Richardson နှင့်သင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုနှိပ်ပါ။
အချို့ဖိနပ်bolt ၂ ခုနှင့် bolt သုံးနင်းနှစ်မျိုးလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းအထူးစွမ်းဆောင်ရည်များအပါအ ၀ င်များစွာရှိသည်ဖိနပ်, တစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ကိုသေချာစွာကြည့်ပါစက်ဘီးစီးဖိနပ်သင်၏ခြေနင်းကိုသေချာစေရန်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာနှင့်ချောသင်၏နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်ဖိနပ်။
အပေါ်လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါcleats ပိုမိုလွယ်ကူသည်ထက်အချိန်မှန်/ချစ်သူ။ ငါလည်းသုံးတယ်ခြေနင်းကြည့်ပါပြီးခဲ့သည့် 10 နှစ်များအတွက်။ သူတို့ဟာအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီဇင်ဘာ ၁၉ 2019
ဘယ် SPD သို့မဟုတ် SLD ကဘာလဲ။
၎င်းတို့သည်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းခံရပြီး (သူသည်ဖိနပ်၏အောက်ခြေသို့မ ၀ င်ဘဲ) ထိတွေ့ခံရခြင်းကဆိုလိုသည်SPD-SLသင်ပုံမှန်သူတို့ကိုလမ်းလျှောက်လျှင် cleats မျှမျှတတလျင်မြန်စွာဟောင်းနွမ်း။SPDcleats သတ္တုဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပါပဲပိုကောင်းသင်လမ်းလျှောက်သောအခါအကာအကွယ်ပေးထားသည်။၂၂ နို။ 2017 နိုဝင်ဘာ
ဒါပေမယ့်ကတည်းကစက်ဘီးစီးဖိနပ်အရပျသို့သော့ခတ် (သို့မဟုတ်အတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းSpeaking, 'clip in') သူတို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်ချော်ခြင်းမရှိကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ခြေရာခံရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည် - ဆိုလိုသည်မှာခြေကျင်း၊ ဒူးနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးဒဏ်ရာများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ညှပ်ခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင်၏ခြေကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်းဖြစ်သည်ဟု Buschert ကပြောသည်။စက်တင်ဘာ ၁၈ ၂၀၁၄
Theစက်ဘီးစီးခြင်းကမ္ဘာကြီးလုပ်နိုင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါစေတစ်ခုသို့နှစ်မြှုပ်ရန်, ဒါပေမယ့်အတိုအဖြေသောကွောငျ့ဖွစျသညျသင် လုပ်သည်မလိုပါဘူးချောရန်စီးနင်းလိုက်ပါလမ်းတစ်လမ်းဆိုင်ကယ်;သင်လုပ်နိုင်သည်ရုံဒဏ်ငွေနင်းမရှိသူတို့ကို။ သို့သော်သူတို့အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံကို ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေနိုင်သည်မင်းကလေးနက်သောမြင်းစီးသူရဲဖြစ်လာနှင့်သူတို့လုပ်နိုင်တယ်ပေးမင်းအဆိုပါနင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှု။
လမ်းဖိနပ်၊ လမ်းလိုပဲချောမည်သည့်သိသာထင်ရှားသောအကွာအဝေးလမ်းလျှောက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်။ ဥပမာ,ShimanoSPD-SLချောအပေါ်အခြေခံထားတယ်ကြည့်ပါစနစ်ပေမယ့်Shimano cleatsနှင့်သဟဇာတမရှိကြပေခြေနင်းကြည့်ပါနှင့်အပြန်အလှန်။
SPD နှင့် SPD SL တို့၏ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
SPDနှင့်အတူ Shimano Pedaling Dynamics ကိုဆိုလိုတာပါSLSuperLight အတွက်ရပ်နေ၏။ ၎င်းသည်စနစ်များကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စတစ်ခုပေးသည်။SPD၎င်းသည်တောင်တက်စက်ဘီးနင်းများအတွက်ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်လာသည်SPD-SLအဓိကအားဖြင့်ကားစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ 2021